China Okuluhlaza Okwesibhakabhaka Ujacquard China Manufacturers & Suppliers & Factory
Okuluhlaza Okwesibhakabhaka Ujacquard - umkhiqizi, ufektri, umhlinzeki waseChina
(Yonke imikhiqizo engu- 24 ye-Okuluhlaza Okwesibhakabhaka Ujacquard)
Indwangu eluhlaza okwesibhakabhaka eluhlaza okwesibhakabhaka yokugqokwa
Siyakwamukela vakashela i-Yanzi Textile, singabakhiqizi bezokwakha indwangu yaseJacquard enesipiliyoni sebhizinisi esingaphezu kweminyaka engu-10. Indwangu yethu eluhlaza okwesibhakabhaka eluhlaza okwesibhakabhaka imboza iphethini lembali yejacquard, indwangu enamapheshana wejometri, indwangu yejacquard yensimbi...
Indwangu eluhlaza okwesibhakabhaka eluhlaza okwesibhakabhaka eluhlaza okwesibhakabhaka
Indwangu eluhlaza okwesibhakabhaka i-Blue White Flower Denim Fancy is yaklanywa kusuka kuphethini elihlanganisiwe lapho izindwangu zihlanganiswa phakathi kwe-warp ne-weft. Amaphethini amahle ahlukahlukene anjengezimbali, izinyoni, izinhlanzi, izinambuzane nezilo, njll. Angalulwa ngendwangu ye-jacquard denim. Izinto...
Indwangu yethu ye-Blue Pink Flower Polyester Mesh Handmade Flower Fabric yenziwe nge-100% polyester. Zenzelwe abaklami abadumile, yini ekhethekile ukuthi ubuhlalu buhanjeke ngesandla, ngakho indwangu yethu yokufakelwa kwe-vantage intambo iyanethezeka futhi ibucayi. Imibala yokuhlukahluka ingakhethwa emgqokeni...
Indwangu eluhlaza okwesibhakabhaka ye-Blue Beaded Pearl Dubai Lace Indwangu
Indwangu ye-Blue Beaded Pearl Dubai Lace Indwangu inemibala egqamile, ebukeka kabi futhi inomqondo oqinile wokwenza kanye nephethini yokulinganisa. Izingubo ezenziwe ngendwangu yelayini ye-dubai zibukeka kahle futhi zibukeka ngamehlo. Ngo-100% we-polyester impahla, ama-african lace akulula ukugqwala lapho ugeza, futhi...
Okuluhlaza Okwesibhakabhaka Ujacquard
Indwangu eluhlaza okwesibhakabhaka uJacquard
Indwangu eluhlaza okwesibhakabhaka ye-Mint Green Jacquard
Indwangu eluhlaza okwesibhakabhaka eluhlaza okwesibhakabhaka
I-Cotton Phrinta enemibala eluhlaza okwesibhakabhaka
Indwangu eluhlaza uJacqurd